Haweenay Markii Ugu Horaysay Garsoore Ka Noqotay Tartan Kubbada Cagta Ee Horyaalada Yurub – Heemaal News Network
Haweeney ka mid ah booliska Jarmalka ayaa noqotay qofkii dumar ah ee ugu horeesay ee garsoore ka noqota ciyaar ay dheelayaan rag oo ka tirsan horyaal ka mid ah kuwa ugu weyn kubadda cagta Yurub.
Bibiana Steinhaus, oo 38 jir ah ayaa seeriga u haysay kulan ay yeesheen kooxaha Hertha Berlin iyo Werder Bremen oo ka tirsan horyaalka Jarmalka ee Bundesliga.
Waa haweeneydii ugu horaysay ee garsoore ka noqota ciyaar ay rag dheelayaan oo ka tirsan horyaallada dalalka caanka ku ah kubadda cagta ee Yurub, sida Jarmalka, Ingiriiska, Faranisiiska, Talyaaniga iyo Spain.
Bibiana Steinhaus ayaa khibrad ballaaran u leh garsoorenimada kubadda cagta, waxaana ay qabatay fiinaalkii horyaallada gabdhaha ee sanadkan, iyo weliba kulamo ka tirsan horyaalka labaad ee kooxaha ragga ee Jarmalka.
Waxa ay sheegtay in aanay waxba kaga duwaneyn garsoorayaasha ragga ah.
Ciyaarta ay garsooraha ka noqotaya ayaa ku idlaatay barbaro 1-1 ah, wax khilaaf ahna kama dhicin.
Iska Eeg Magacaagu In Uu Ku Jiro Dadka Ay Alshabaab Dilka Ku Xukuntay (Duk La Helay Dadka U Xakuman Alshabaab)
Sir Mo Farah ayaa ku guuldareystay Tartanka Orodka 5,000m ee adduunka, kaddib markii uu kaalinta labaad uu caawa ka galay orodka 5,000m ee Tartanka ciyaaraha fudud Adduunka ee ka socda London. Orodyahan u dhashay dalka […]
Mo Farah Oo Qorsheeyay In Uu Tartanka Caalamiga Ah Ee Orodka Ka Fariisto Dhawaan
Orodyahanka reer Britain ee Mo Farah ayaa shaaciyay in bisha soo socota ee August uu ka fariisan doono ciyaarha orodka ee caalamiga ah, taas badalkeedana uu culayska saari doono ka qaybqaadashada tartanka Maraadoonka Orodyahankan ku […]